मनोज गजुरेलको बिहे भएको थाहा पाएर पूर्व पत्नि मिना ढकालले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मनोज गजुरेलको बिहे भएको थाहा पाएर पूर्व पत्नि मिना ढकालले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया
मनोज गजुरेलको बिहे भएपछि उनकी पूर्व पत्नि मिना ढकालको प्रतिक्रिया के रहला भन्ने सबैतिर चासो छ । तर मिनाले भने त्यस्तो अनौठो केही प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । उनले मुकुन्द घिमिरे नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताको फेसबुक स्टाटस सेयर गरेर ‘त्यही त नि ।
के नै ठूलो र नौलो काम गर्यो हो र ?’ लेखेकी छन् । उनले सेयर गरेको स्टाटसमा ‘उ त्ता उ लो कानुनले के गर्‍यो? के गर्‍यो? अर्कीको लोग्नेले अर्काकी स्वास्नीलाई बिहे गर्‍यो ।’ लेखिएको छ ।
मनोज गजुरेलले सोमबार बिहान फेसबुकमा मञ्जु पोखरेललाई श्रीमतिका रुपमा घरमा ल्याएका बताएका थिए । उनले फेसबुकमा एक स्टाटस लेखेर फोटो राख्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । मनोजका अनुसार उनकी श्रीमति सरकारी सेवाकी अधिकृत हुन् । उनी हाल न्याय सेवा अन्तरगत कार्यरत छिन् । उनीहरु दुबैले सोमबार बिहे गरेका हुन् ।
मनोजले नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिनजान हुनपुग्यो । बिस्तारै हाम्रो घनिष्टता बढ्न थाल्यो । एकैखालको परिबेश र उस्तै खालको भोगाईबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौं भनेर फेसबुकमा लेखेका छन् ।